Varume vasina kuda vakadzi, kubudirira kwekupedzisira kwaLarsson | Zvazvino Zvinyorwa
Varume vasina kuda vakadzi
Varume vasina kuda vakadzi ibhuku rematsotsi rakanyorwa naStieg Larsson. Yakabudiswa muna 2005, gore mushure mekufa kwemunyori, uye ndiro bhuku rekutanga munhevedzano Mireniyamu. Kuvhurwa kwayo kwakabudirira, sezvo yakatengesa mamirioni emakopi munguva pfupi.
Nyaya inosuma Michael Blomkvist (mutori wenhau) y a Lisbet Salander (hacker), ndiani achauya pamwechete kuzogadzirisa nyaya inosanganisira yakakosha mhuri yeSweden. Ichi chiitiko chekutanga chakagadziriswa kune iyo cinema kaviri; yekutanga, muna 2009 kuburikidza nekambani yekugadzira muSweden. Zvino muna 2011, iyo American vhezheni yakaburitswa, uko mutambi Daniel Craig uye mutambi Rooney Mara vakaumba vaviri vaitungamira.
1 Varume vasina kuda vakadzi
1.1.3 Nyeredzi vaviri
2.1 Basa raitwa
2.3 Posthumous kuburitswa
Varume vasina kuda vakadzi Ndicho nhema nhema izvo zvinotanga trilogy Millennium. Nhoroondo inoitika muSweden muna 2002, uye dingindira rayo rinotenderera nekutsakatika kwaHarriet Vanger ane makore gumi nematanhatu, kwakaitika makore anoda kusvika makumi mana apfuura. Kuti vaone kuti chii chakaitika kune aimbove achiri kuyaruka, Vanger akabata mupurisa uye wekubira makomputa Lisbet Salander uye mutori wenhau Mikael Blomkvist.
Mikael Blomkvist mutori wenhau uye mupepeti wemagazini yezvematongerwo enyika yeSweden Millennium. Zano racho rinomuisa panguva yakaoma mushure mekurasikirwa nehuremu sutu kupokana neindasitiri Hans-Erik Wennerström. Blomkvist akataura kuti muzvinabhizinesi aive nehuwori, zvakadaro, dare rakaona humbowo hwacho husingaenderane uye rakamanikidza mutori wenhau kuti ashumire mwedzi mitatu mutirongo uye abhadhare faindi inodhura.
Gare gare, Henrik Vanger -Akave director weVanger Corporation-- bata Lisbet Salander kuongorora Blomkvist. Mushure mekuregedzwa kweshumo, Vanger anosarudza kuhaya mutori wenhau kuti aongorore about kutsakatika kwemuzukuru wake Harriet, yakaitika makore makumi matatu nemana apfuura. Mukutsinhana, anopa humbowo hwakasimba hunopesana neWennerström; kugutsikana nemubairo, Blomkvist anogamuchira.
Mutori wenhau anoenda kuHedeby Island, nzvimbo inogarwa neVanger uye pakaitika kutsakatika kwaHarriet. Ikoko achasangana naMartin —Mukoma wemusikana akashaya— uye dzimwe nhengo dzemhuri, pamwe nevamwe vekushamwaridzana nekambani.
Pakati pekuferefeta, Blomkvist ichave nerutsigiro rweSalander, ndiani achakubatsira iwe kuisa zvidimbu zvepuzzle pamwe chete kusvikira iwe wasvika pamugumo unoshamisa.
Mugore 1966 ivo Vanger vakaunganidzwa pane imwe purazi yemhuri iri paHedeby Island. Yakanga iri nguvai yenguva dzose yekudyidzana uye kutandara, zvakangoerekana zvashanduka kuita chimwe chinhu chinoshatirisa mushure meiyo Kutsakatika kwaHarriet.
Mamiriro acho aishamisa zvikuru, mapoka emapurisa akatsvaga asinganeti vasina kuwana chero mhando yekutsvaga. Kupfuuridza nguva, nyaya yacho yakavharwa, pasina humbowo kusimbisa kufa kwake, kubiwa kana kutiza kusingatarisirwi.
Pakusvika kuchitsuwa, Mikael Blomkvist anobvunzurudza hama dzinoverengeka dzaHarriet, kusanganisira amai vake uye mukoma - ndiani director mutsva wekambani. Mukati mekutsvaga kwako tsvaga zvairatidza kuti zvainge zvamboonekwa: piri Mifananidzo yemukadzi wechidiki ari kusekondari y dhayari rake. Iyo yekupedzisira yaive nemazita mashanu nenhamba, zvinova zvakavanzika.
Pernilla (Mwanasikana waBlomkvist) ari kupfuura nepachitsuwa ichi uye anobatsira kugadzirisa dambudziko. Kuwanikwa uku kunotungamira mutori venhau kuuraya kwemunyori yekambani yeVanger, yakaitika muna 1949. Blomkvist akabata Henrik, akamuita kuti azive nezvemamiriro ezvinhu ndokukumbira rutsigiro rwake. ndiani anofunga kuti iye muurayi. Pakarepo, muzvinabhizinesi anofunga kutumira Lisbet Salander kuti aite zvakapetwa kaviri naMikael nekudaro achimhanyisa nyaya.
Pane imwe nguva Lisbet ajoina kuferefeta kwaBlomkvist, ivo vanopedza kugadzirisa Chakavanzika chakanyudzwa mudhayari raHarriet. Ruzivo irworwo zvakavatungamira kuti vaone zviitiko zvevakadzi vakati wandei vakashaika; iwo manhamba airatidza mavhesi ebhaibheri kwakatsanangurwa zvirango zvine simba zvaMwari. Izvi zvinosimbisa dzidziso yemutori wenhau: iyi mhondi yekuuraya.
Gare gare ivo vanowana mamiriro anotyisa: Martin - Mukoma waHarriet-- inobata chibharo nekuuraya vakadzi vakawanda. Nekutarisana naye, anotsigira idzi mhosva dzinotyisa uye obvuma kuti akadzidza zvese kubva kuna baba vake, Geoffrey Vanger. Kunyangwe akazivisa zviito zvese zvisina hunhu, Martin anoti hapana chaanoziva nezve zvakaitika kuna sisi vake.
Geoffrey Vanger —Musoro wemhuri— akazove aive iye zvinyorwa zvemunyori yematare kune iyo chirahwe mudhayari; Uye zvakare, imwe mhosva inotyisa inoratidzwa: akabata vana vake vaviri pabonde kakawanda.
Martin, mushure mekuwanikwa, kona Lisbet naMikael kuvauraya, asi ivo vanobudirira pukunyuka. Kubva ipapo vanotanga kubatanidza iwo madota uye kuwanikwa kunoshamisa kunoitwa kunotendera kuti nyaya igadziriswe, vachitsvaga kwaHarriet.
Karl Stig-Erland Larsson yaive Munyori weSweden uye mutori wenhau akaberekwa musi waAugust 15 kubva 1954 mutaundi re Skelleftea. Vabereki vake - Vivianne Boström naErland Larsson - vaive vadiki kwazvo uye vasina mari yakakwana pavakamubata; nekuda kweizvi, Stieg akarererwa nasekuru nasekuru vake munyika.
Paaive nemakore gumi nemapfumbamwe, sekuru vake vakashaya, zvichimuita kuti adzokere nevabereki vake kuUmeå. Makore matatu gare gare, akagamuchira tapureta uye akazvitsaurira kunyora manheru ega ega, kubva kubva pazera diki kwazvo akatambura nekushaya hope. Hama dzake dzakakanganiswa neruzha rwechigadzirwa ndokumutumira kuimba yepasi; Aya mamiriro asina kugadzikana akaita kuti Stieg afunge kuenda kuzvimiririra.
Kunyangwe ndisina degree reyunivhesiti, Stieg akashanda makumi maviri nemaviri akateedzana makore semugadziri wemifananidzo kunhau yakabatana Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Zvakare Aive muratidziri wezvematongerwo enyika uye akatungamira kuratidzira kwakawanda vachirwisa Hondo yeVietnam, rusarura uye kodzero yakanyanyisa. Nekuda kweizvi, akasangana naEva Gabrielsson, anga ari mumwe wake kweanopfuura makore makumi matatu.
Uye 1995, aive chikamu chevagadziri ve Expo Nheyo, Yakagadzwa kuti iferefete uye inyore zviito zverusarura uye nhungamiro dzinopesana nedemocracy. Makore mana gare gare akatungamira magazini ExpoIkoko, akaita basa rakaoma semunyori wenhau. Kunyangwe ichirwisa kuti magazini irambe ichishanda, yakazovharwa nekuti haina kuwana rutsigiro rwakakodzera
Akaburitsa mabhuku akati wandei zvichibva pamubvunzo wenhau pamusoro pekuvapo kwevaNazi munyika yeSweden uye kubatana nehurumende iripo. Nekuda kweizvi uye kuvapo kwavo kwekuratidzira mukuratidzira, akatyisidzirwa nerufu kakawanda. Ichi chaive chimwe chezvikonzero zvikuru nei akadzivisa kuroora Eva, kuchengetedza hunhu hwake.
Stieg Larson Akafira muStockholm munaNovember 9, 2004 yechirwere chemwoyo. Izvo zvinofungidzirwa kuti izvi zvakakurudzirwa nenyaya yekuti munyori weSweden aive akasvuta cheni, husiku husiku uye anoda zvekudya zvisina kudya.
Mazuva asati afa zvisingatarisirwi, munyori akapedza chikamu chechitatu chetatu Millennium. Panguva iyoyo mupepeti waro aishanda pane vhoriyamu yekutanga inonzi Varume vasina kuda vakadzi. Iri bhuku rakaburitswa gore mushure mekufa kwake uye rikave budiriro inoshamisa. Muparidzi anovimbisa kuti saga iri ratengesa anopfuura mamirioni makumi manomwe nemashanu emakopi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Varume vasina kuda vakadzi
Varume Marías. Kubvunzurudza nemunyori weiyo Yekupedzisira Njiva